जिल्ला सभापतिहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा किन आपत्ति ? - Pradesh Dainik
जिल्ला सभापतिहरू एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा किन आपत्ति ?
शुक्रबार, चैत २२, २०७५ , प्रदेश दैनिक
नेता, नेपाली कांग्रेस
चुनावी नतिजामा इतिहासकै कमजोर देखिएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक गुटबन्दीको चपेटामा परेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी नेतृत्वमा दबाव दिनका लागि भेला नै बोलाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूहको बैठक भएको र पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यसैसन्दर्भ पारेर हामीले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालासँग पार्टीमा देखिएको मतभेद र समस्या तथा नेपाली कांग्रेसको आशन्न महाधिवेशन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ डा. कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः–
बुधवार ५० भन्दा बढी कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बसेको छ । यो भेलाबाट सभापतिलाई कमजोर सावित गर्ने प्रयासका रुपमा संस्थापनका नेताहरुले बताइरहेका छन्,के साच्चै पार्टी सभापतिलाई कमजोर पार्न खोजिएको हो त ?
‘लाइक माइन्डेड’ सभापतिहरु छलफल गर्नु स्वभाविक हो । यसमा विवाद गर्नु पर्ने जरुरत छैन । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरु शेरबहादुर कहाँ बस्न सक्ने, रामचन्द्र पौडेलको मा बस्न सक्ने ? सभापतिहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा किन आपत्ति ? यसरी विरोध गर्नुको अर्थ हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पंक्ति पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने प्रयत्न गर्दै छ, र यस्ता भेलालाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन । यस्तो भेला स्वभाविक हो ।
साथीहरुले तपाईं बस्नुस् भन्नुभयो भने बस्नुपर्ला । अगाडि बढनुस् भन्नुभयो भने बढ्नुपर्ला १ यो त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले डिसाइड गर्ने हो नि । इट्स अर्ली टु से १
धेरै दौडधूप गरिरहनु भएको छ अब चाँही महाधिवेश लागे छ है ?
महाधिवेशन त आयो नै । पार्टीले महाधिवेशनको तयारी गरेको छैन । जिल्लाहरु घुम्नु पर्‍यो भनेर निस्किरहेको छु । खासगरी जिल्लाको सदरमुकाम भन्दा मलाई गाउँ घुम्न मन लाग्छ । सदरमुकाम भन्दा धेरैजसो ठाउँमा गाउँ पुग्ने गर्छु ।
नेतृत्वबारे केही सोच बनाउनु भएको छ ?
धेरै सिनियर साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग पनि सिक्दै छु, अहिले । उहाँहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ । के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ ? पार्टीलाई कसरी लैजाने ? कसले सक्छ भन्ने कुराहरु गरिरहेका छौँ ।
साथीहरुले तपाईं बस्नुस् भन्नुभयो भने बस्नुपर्ला । अगाडि बढनुस् भन्नुभयो भने बढ्नुपर्ला १ यो त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले डिसाइड गर्ने हो नि । इट्स अर्ली टु से,
कोइराला परिवारका नेताहरु एउटै मालामा जोडिनुभयो । त्यसको प्रतिक्रिया पार्टी सभापतिले कांग्रेस कोइरालको विर्ता होइन भन्नु भयो १ कांग्रेसमा गुटगत समस्या निकै धेरै बढेको छ, पार्टी कमजोर भएको समयमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने होइन र ?
अहिले के समस्या भइरहेको छ भने म जुन परिवारमा जन्मिएँ त्यो परिवारले मलाई राजनीतिक कुराहरु सिकायो । राजनीतिमा नैतिकताको आधारमा हिँड भनेर सिकायो । मलाई लाग्दैन मैले कुनै गलत कुराहरु सभापतिको जीको बारेमा भने होला । सभापतिजीले किन भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन त्यो उहाँको विषय हो । उहाँको राजनीति संस्कार होला कि त्यसरी बोल्ने ? दोस्रो कुरा, सभापतिजीले केही ठाउँहरुमा भन्नुभयो मैले दुईपटक बोलाए, उहाँलाई सम्झाए भन्नु भयो । ठिक हो, सम्झाउनु भयो, बोलाउनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर मैले पनि सभापतिजीलाई के भनेको छु भने तपाईले आफूले पढ्नुहुन्न, हेर्नुहुन्न । तपाइलाई कसैले आएर सुनाइदिन्छ अनि त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ । म त तपाईकै जुनियर कलिक हो तपाईं मेरो आदरणीय सभापति हो । तपाईं मलाई बोलाएर सोध्नुस् न १ बोलाएर सोध्नुभयो भने म सत्य के हो बताइदिहाल्छु नि । अरुले के भन्छन् भन्ने भरमा चाहिँ नजानुस् । यो कुरा मैले पटकपटक भनिरहेको छु । तर उहाँ आफ्ना कुलिङ्सहरुले जे भन्छन् त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ, त अब त्यसको उत्तर छैन मसँग ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण सरकारको कद घटिरहेको छ यस्तोमा प्रतिपक्षीले पनि उचाइ पाइरहेको छैन किन होला ?
राजनीति गर्ने व्यक्ति संस्था हुन्छ । त्यो संस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा मानिस कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । काम गर्ने मानिसले अर्थ राख्छ, त्यहाँ रहेको भवनले कुनै अर्थ राख्दैन । काम गर्नेहरुले गरेनन् भने जति सुकै राम्रो भवन र राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेपनि केही हुँदैन ।
अहिले नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरु नैतिकताको कसीमा खरो उत्रन सक्नु भएको छैन । त्यसको फरक फरक कारणहरु होलान् । धेरै वर्ष सरकारमा बसेपछि बोल्ने तागत आउँदैन कि रु नैतिकताको कसीमा खरो उत्रन नसक्नु भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।
गतिशिल र कल्चर्ड लिडरको कल्पना गर्र्दै गर्दा, कांग्रेसले केही गल्ती गर्‍यो र यहाँ पुग्यौं भन्ने महसुस गर्नु भएको छ ?
हामीले गल्ती नै गरेनौं त भन्दिन । गल्ति पव्लिकले के भन्छ भने राजसंस्था राख्नुपर्थ्यो तपाईंहरुले गल्ती गर्नुभयो भन्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कालान्तरमा हामीले विगार्दै गयौं र पव्लिकले त्यो चाहिन्छ भन्यो भने फरक कुरा हो ।
अर्को संघीयताको कुरा, स्थानीय तहको विषयमा नेपाली कांग्रेस बेखबर थियो । जिल्ला सभापतिहरुले भन्नु भयो स्थानीय तह गडबढ हुँदैछ । जिल्ला सभापतिहरुसँग छलफल भयो । त्यसपछि बालानन्द शर्मा जी भएको ठाउँमा गइयो । छलफल भयो । अनी अलिकति संख्या पनि भन्नु भयो । त्यतिबेलासम्म हामी स्थानीय तहको संख्याको बारेमा समेत बेखर थियौं । पहिलाकै जस्तो हुन्छ भन्ने सोच राखेर पार्टी त चल्दैन नी
त्यस्तै स्थानीय तहमा कहिले माओवादीलाई जिताउन भनेर रेणु दाहालाई समर्थन गर्यौं । अब हामीले संविधानमा हटाउन हुन्थ्यो, राख्नु हुन्थ्यो, केही नलेख्या भए हुन्थ्यो धार्मिक स्वतन्त्रता राखेको भए हुन्थ्यो । प्रयासमा पनि केही कुरामा सिरियसनेस नै देखाएनौं हामीले । यो सब विषयमा चुक्यो कांग्रेस । इन्ट्रेस्टिङ्ली प्रदेशको केन्द्रको चुनाव भयो हामीले पटक पटक सोध्यौं तर आजको दिनसम्म पनि जवाफ पाएनौं । स्थानीय तहमा रेणुलाई भोट दिन लागाउनुभयो, किन लगाउनु भयो पार्टीलाई के फाइदा भयो थाहा भएन । जसको परिणाम अब चितवनमा कहिल्यै पनि कांग्रेसले जित्दैन । तीनै क्षेत्र गुमाउँछौं । त्यस्तो अवस्था छ ।
प्रदेशमा अझ रोचक छ । उपेन्द्र यादवलाई नेपाली कांग्रेसले किन सीट छोड्यो थाहा छैन । महन्थ ठाकूलाई किन छोड्यौं थाहा छैन । कमल थापालाई किन छोड्यौं थाहा छैन, विक्रम पाण्डेलाई किन छोड्यौं त्यो पनि थाहा छैन । के को लागि छोड्यौं थाहा छैन । तर शेखर कोइरालाका लागि कुन चाहिँ राजपा, संघीय समाजवादी वा कसले छोड्यो ? सभापतिले त यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो । एकातिर हामीले कमल थापाका लागि सिट छोड्यौं अर्कोतिर सिटौला जी को लागि कमल थापाले सीट छोड्नु नपर्ने त्यस्तो पनि राजनीति हुन्छ ?
यो विचित्र भएको छ । यति मात्र होइन महासमितिमा राजनीतिक प्रस्तावमा संसद पुनस्र्थापन नलेखिनु पर्दैन थियो ? यो त इतिहास हो, अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले हेर्छ, कांग्रेसको आर्थिक दृष्टिकोण के हो, धार्मिक दृष्टिकोण के छ ? यसमा संसद पुनस्र्थापनाको कुरा नेलेख्ने कुराले हामी चिन्तित भएका छौं ।
नेपाली जनताले छोटो अवधिमा राणा शासन, पञ्चायत, बहुदल, राजाको शासन, गणतन्त्र सबै भोगे । जुन व्यवस्था आएपनि जनताले निराशामात्र हात पार्ने गरेका छन् । लामो समयको राजनीतिक अनुभव र एकजना महत्त्वपूर्ण नेताका हैसियतमा तपाईंले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मैले हेरिरहेको छु नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, नेकपामा पनि त्यही समस्या छ । त्यो भनेको नैतिकताको हो । र अब हामीहरुमा पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने बेला आउला त्यसमा हामीले छान्ने व्यक्तिहरु सरकारमा होस् वा पार्टीमा होस् नैतिकतामा खत्रो उत्रने मानिसलाई मात्र राख्न सक्नु पर्छ । त्यतिबेला नेशन फस्र्ट भन्ने व्यक्तिलाई मात्र राख्नुपर्छ ।
जनताले गत चुनावमा नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा नेकपालाई छाने, दुई तिहाइको सरकार छ तर पनि राजनीति अस्थिर जस्तो देखिएको छ, किन होला ?
नेपालको भौगोलिक परिस्थिति हेर्नु भयो भने दुई ठूला छिमेकी शक्ति राष्ट्रसहित अमेरिका, युरोपको नेपालमा ठूलो लगाव र लागनी छ । र, सबैको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि छ ।
पहिलो शक्ति अमेरिका र दोस्रो चीनको इन्ट्रेस्ट आइसक्यो । नेपाल संग्लिएर हिँड्न सकेन भने निकै ठूलो समस्या पर्छ । एउटा ओविओर र अर्को इण्डो प्यासिफिक छ । बीचमा हामीहरु कसरी सहज सरल तरिकाले आफूलाई सन्तुलित बनाएर नेपाललई अगाडि लैजान्छौं भन्नेले अर्थ राख्छ ।
अहिलेसम्म हामीले खाली दुईवटा छिमेकीलाई मात्र हेरिरहेका छौं । पहिला दक्षिणमा मात्र हेर्यौं पछि भएपछि उत्तरलाई मात्र हेर्यौं । उत्तर र दक्षिण भन्दा अरु छिमेकी पनि छन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्‍यो । यो तीनवटा शक्तिवाहेक दातृ राष्ट्रलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । देश चलाउनका लागि त चल्छ तर चपेटामा पर्छौं की भन्नेलाई लाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।
एमसीसी राष्ट्रहितमा छ, सदनमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्छ ः सांसद नवीना लामा
‘वडाध्यक्षमा मेरो उम्मेद्धारी वडावासिको चाहना हो’ – नवराज तुम्वापो
ज्ञवली नेतृत्वमा आयाेग : सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न बनाइएको थियो
तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको विकासनिर्माणमा अनुकूल आधार तयार भएको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
देशको विविधताले सङ्घीयताको माग गरेको हो : मन्त्री त्रिपाठी